Miyaan dhisi karaa backlink tayo sare leh oo aan halis u aheyn in aan waxyeeleeyo qiimadayda?
Kaliya website-yada lagu kalsoon yahay iyo blogs leh PageRank iyo hay'ad domainka ayaa ah meelo sax ah oo lagu dhisayo dib-u-tayo sare leh. Dhab ahaantii, matoorada raadinta ayaa falanqeynaya dib-u-qabashadaa si ay "fahmaan" sida website-kiisa ugu qanacsan, iyo qiimaha dhabta ah ee ay bixiso dadka isticmaala. Taasina waa sababta ay u leedahay hindise xiriirin tayo bini'aadam ah oo loogu talagalay bogga ama blogku waa mid aad u muhim ah, haddii aadan rabin in lagu muujiyo meel aad uga fog natiijooyinka raadinta ugu sareysa ee Google ee SERPs.
Maxay sameysaa Profile Link Link
Isla mar ahaantaana, astaamaha dabiiciga ahi waxay ku talinayaan inaad dhiseyso tayo sare oo dabiici ah oo dabiiciyan ah. Tusaale ahaan, wax kasta oo xariif ah, spammy, tayo hoose, tayeysiin, ganacsi ama isdhaafsi la xidhiidha xidhiidhada ayaa ah kuwa ugu neceb badan Google. Dhab ahaantii, ficillada noocan oo kale ah ayaa ku fashilmay in ay u hoggaansamaan Xeerarka Waddan ee Guud, kuwaas oo guud ahaan loo aqbalo horumarinta webka iyo fikradda guud ee Mashruuca Optimization scale. Marka, maxaa ka dhigaya istiraatijiyad dhisme oo si caddaalad ah u dhisan oo aan waligeed loo aqoonsan inuu yahay xadgudub? Dhamaan waxaad u baahan tahay oo kaliya in la dhiso dib u eegis tayo sare leh adigoon codsanin kuwa horey loo soo sheegey ee khudbadaha ama mashaqooyinka aan lagu ansixin makiinada waaweyn ee raadinta. Keliya waxeey dhacaan si dabiici ah.
Aan hoos u degeyno. Waa maxay qaabka ugu haboon ee dhismaha xidhiidhinta tayada? Waxaan aaminsanahay in dhammaan waxaad u baahan tahay inaad dareento ammaan inay tahay inaad ka fogaato "dhinac madow". Waligaa ha tagin wax kasta oo ah Gray-Hat SEO ama farsamada SEO-yada Black-Hat, kuwaas oo loogu talagalay oo kaliya loogu talagalay in lagu xakameeyo ama lagu xakameeyo algorithm qaabka loo isticmaalo Google si loo go'aamiyo jagada darajo kasta oo website ah ee SERPs. Habkaas, ma jiri doonto qol ka banaan in lagu caddeeyo boggaaga internetka ama blogka Google ciqaabta rikoorka.
Ku dhiirigeli xiriirinta tayada leh mawduucyada tayada
Ka dhigo waxyaabaha aad u adeegeyso sidii farsamooyin wax ku ool ah si loo dhiso dib-u-tayo sare ee habka ugu wanaagsan ee suurtogalka ah. Waxaa macquul ah in habka ugu wanaagsan ee dhismaha xiriirka ah ee organic uusan lahayn wax khatar ah oo lagu waxyeeleynayo darajooyinkaaga. Xusuusnow - marwalba waxaad ka heli kartaa wax badan oo ka baxsan boggaaga caadiga ah - dhammaan waxa aad u baahan tahay waa inaad hubisaa in ay tahay mid gaar ah, khuseeya oo bixisa qiimaha dhabta ah si aad u dhagaystayaasha ujeedadaada. Habkaas, waxaad awoodi doontaa inaad ku sii socotid dib u soo kabashada, hogaaminta, liiska, saamiyada, iyo hadalada. Isla mar ahaantaana, waxaad naftaada u abuuri doontaa hoggaamiye warshadeed oo madaxbanaan, iyada oo la helo miisaan aad u weyn oo leh boggaaga ama blog-kaaga oo ka muuqda aragtidaada soo booqda, iyo sidoo kale matoorada raadinta laftooda.
Ugu dambeyntii, halkan waxaa ku yaal qodobbo khafiif ah oo lagaa rabo si aad u bilowdo socodka saxda ah. Sidaa daraadeed, waxaad ku dhisi kartaa dib u eegis tayo sare oo loogu talogalay SEO-yada oo aad dareemayso nabadgelyo bilawga ah:
Hubi in mawduucaagu aanu kaliya bixinayn qiimaha sare ee dadka saxda ah, laakiin waxa la siinayaa dhibicda safarka macmiilka. Waa wakhti aad ku xasuusato aasaasiga ah ee suuq-geynta wanaagsan ee digital-ka, sax?).
Waa inaad caqli-gal noqotaa inaad abuurto internetka joogtada ah ee internet-kaaga. Ka qayb gali bulshooyinka xiisaha leh iyo abuurista dhowr farsamooyin ganacsi oo waaweyn si ay u qaybiyaan qoraallada ugu wanaagsan ee Warbaahinta Bulshada.
Tixgeli qayb ka mid ah qoraalkaaga qoraalka ah. Xusuusnow, dhammaan waxaad ubaahan tahay inaad bilowdo dhismo xidhiidhsan oo dabiiciga ah - ka hel waxyaabaha aad ku qiimeyso wadaagista, xusuusinta, iyo helitaanka xiriirka. Ku samee sida ugu dhow ee isku-dhafan - dib u samee qaar ka mid ah jaangooyooyinka iyo qiimaha qiimaha waxyaallo si dhab ah u rafcaan iyo indho-qabasho, sida noocyada kala duwan, sawirrada faafa, iyo hab kasta oo kale ee muuqaalka xogta. Taasi waxay u shaqeyneysaa dhismaha isku xirka, ka sokow habka ugu nabadgelyo badan Source .